ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကိုစစ်ဆေးခြင်း, တည်ငြိမ်မှုစမ်းသပ်။ - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကဒ်၏စွမ်းဆောင်မှုတွင်ဂိမ်း (အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်အသစ်တွေ) ၏လိုင်းအမြန်နှုန်းပေါ်မူတည်ပါသည်။ စကားမစပ်, တစ်ချိန်တည်းမှာဂိမ်း, တစ်ဖွဲ့လုံးကကွန်ပျူတာကိုစမ်းသပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များအကြား (အတူတူပင် spec ၌တည်၏။ စမ်းသပ်အစီအစဉ်များသည်မကြာခဏတိုင်းတာသောအချို့ "အပိုငျးပိုငျး" ဂိမ်းနှင့်ဒုတိယနှုန်းဘောင်၏နံပါတ်အသုံးပြုကြသည်) နေကြသည်။
သူတို့ကတခြားမော်ဒယ်များနှင့်အတူကဗီဒီယိုကဒ်နှိုင်းယှဉ်ဖို့လိုတဲ့အခါယေဘုယျအားဖြင့်စမ်းသပ်မှုများထွက်ယူသွားတတ်၏။ အများအပြားသည်အသုံးပြုသူများအဘို့, ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမှတ်ဉာဏ်၏ 1GB နှင့်အတူသာမှတ်ဉာဏ် (တကယ်တော့တစ်ခါတစ်ရံကဒ်။ * မှတ်ဉာဏ်ပမာဏလူတယောက်တန်ဖိုးတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍသောတကယ်တော့ 2GB ထက်ပိုမြန်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ပိုပြီးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် Processor ကိုဗီဒီယိုကဒ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်တိုင်းတာ တာယာဒါပေါ်မှာ။ options များ) ၏ကြိမ်နှုန်း။
ဤဆောင်းပါး၌ငါကဗီဒီယိုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်ရေးစမ်းသပ်များအတွက်အနည်းငယ် options များထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုပါသည်။
သင်စမ်းသပ်ဗီဒီယိုကိုစတင်ရန်မတိုင်မီ 1) စကားမစပ်, သင်သူမ၏ဒရိုင်ဘာမှာ (set ကို) update လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအထူး အသုံးပြု. ဒီလိုလုပ်ဖို့အလွယ်ဆုံးပါပဲ။ အလိုအလျောက် drivers တွေကိုရှာပြီး install လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မှာ:
2) စွမ်းဆောင်ရည်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်များသောအားဖြင့် FPS ၏နံပါတ် (တစ်စက္ကန့်ဘောင်) အမျိုးမျိုးသောဂရပ်ဖစ် settings ကိုနှင့်အတူဂိမ်းအမျိုးမျိုးအတွက်ထုတ်ပေးကိုတိုင်းတာသည်။ များစွာသောဂိမ်းအဘို့အကောင်းတစ်ဦးညွှန်ပြချက်သိုင်းကြိုး 60 FPS စဉ်းစားသည်။ ဒါပေမဲ့တချို့ဂိမ်း (ဥပမာ, turn-based မဟာဗျူဟာ) အတွက် 30 FPS မှာဘား - ကအတော်လေးခွင့်တန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါတယ် ...
ဗီဒီယိုကိုကဒ်များကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နဲ့ရိုးရိုး utility ကို။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်, သင်တန်း, ဒါကြောင့်မကြာခဏစမ်းသပ်ပြီးမဟုတ်ပေမယ့်အနည်းငယ်ထက် ပို. တစ်ဒါဇင်မော်ဒယ်များ, program ကိုအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးလိမ့်မည်သည့်အဘယ်သူအားမျှ, တယ်မထားပါဘူး။
အများဆုံးဖို့ဂရပ်ဖစ် adapter အပူ FurMark စိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်ခြင်း။ အရှင်ကဒ်အများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက်ဓြှု။ ပါဝါထောက်ပံ့ရေးဂရပ်ဖစ်ကဒ်ဆိုတာသေချာဖို့လုံလောက်တဲ့အားကြီးသောမပါလျှင်စကားမစပ်, ကွန်ပျူတာ၏တည်ငြိမ်မှုကိုဥပမာ, တစ်ခုလုံးအဖြစ်ဓြှု - ကွန်ပျူတာရိုးရိုး reboot နိုင်ပါတယ် ...
အကြီးအကျယ်အဆိုပါ PC ကို (ဂိမ်းများ, ရေစီးခြင်း, ဗီဒီယို, etc) load နိုငျကွောငျး 1. ပိတ်ပရိုဂရမ်အားလုံးကို။
2. Install လုပ်ပြီး program ကို run ။ စကားမစပ်ကြောင့်များသောအားဖြင့်အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်က၎င်း၏အပူချိန်, မျက်နှာပြင် resolution ကို၏ရရှိနိုင်ပါသည် Modes ကို detect ။
ဆုံးဖြတ်ချက်ရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက် 3. (ငါ၏အမှု၌တစ်ဦး Laptop ကို 1366x768 တစ်ဦးစံ resolution ကိုဖြစ်ပါတယ်), သငျသညျစမ်းသပ်မှုစတင်နိုင်ပါသည်: ဤအဘို့အသင် CPU ကို Benchmark လက်ရှိ 720 သို့မဟုတ် CPU ကိုစိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်မှု click နှိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
4. စမ်းသပ်ကဒ်စတင်ပါ။ ဤအချိန်တွင်က PC ကိုမထိဖို့မ သာ. ကောင်း၏။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုအများအားဖြင့်မိနစ်အနည်းငယ် (မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်စမ်းသပ်ခြင်း၏ကျန်ရှိသောအချိန်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်) ကြာရှည်ခံသည်။
4. ထိုနောက်မှ FurMark ရလဒ်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်: ကိုဤနေရာတွင်သင်၏ကွန်ပျူတာ (လက်ပ်တော့ပ်) ၏အင်္ဂါရပ်အားလုံး, စတာတွေကဗီဒီယိုအပူချိန် (အများဆုံး), တစ်စက္ကန့်ဘောင်၏နံပါတ်, စာရင်းဝင်ပါလိမ့်မည်
အခြားအသုံးပြုသူများ၏နှင့်အတူ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန်အတွက်, သင်ရလဒ်များကို (Submit) ကိုပေးပို့ဖို့ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဖွင့်လှစ်သောဘရောက်ဇာကိုပြတင်းပေါက်ခုနှစ်တွင် 5. , သင်သာမြင်နိုင်ပါသည်၎င်းတို့၏ရလဒ်များကို (အမှတ်အရေအတွက်ကိုနှင့်အတူ) ကိုစေလွှတ်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားအသုံးပြုသူများ၏ရလဒ်များကို, အမှတ်အရေအတွက်ကိုနှိုင်းယှဉ်။
OST (စက်မှုလုပ်ငန်းစံ ... ) သတိပေးရုရှစကားပြောအသုံးပြုသူများသည်၏အမည်ဖြစ်ပါတယ်။ Ost နှင့်အတူအစီအစဉ်ကိုဘာမှရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အရည်အသွေးတစ်ခုလုံလုံလောက်လောက်အဆင့်မြင့်နှင့်အတူဗီဒီယိုကဒ်စစ်ဆေး - ဤနိုင်စွမ်းထက်ပိုမိုပါ!
ကွဲပြားခြားနားသော Modes သာအတွက်စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်တွင်နိုင်စွမ်းဂရပ်ဖစ်ကဒ်:
- ကွဲပြားခြားနားသော pixel shader ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ;
- ကွဲပြားခြားနားသော DirectX ကို (ဗားရှင်း9နဲ့ 11) နှင့်အတူ;
1) tab ကို GPU ကိုကိုသွားပါ: 3D (graphic processor ယူနစ်) ။ Next ကိုသငျသညျအခြေခံ settings တွေကို configure ဖို့လိုအပ်:
- စမ်းသပ်ကာလ (ဗီဒီယိုကဒ်ကိုစစ်ဆေးအဓိက parameters တွေကိုနှင့်အမှားအယွင်းများကိုဖော်ထုတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းတောင်မှ 15-20 မိနစ်လောက်ပေ၏);
- DirectX ကို;
- ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် pixel shader;
- ထိုသို့ရှာဖွေပြီးစမ်းသပ်အမှားပါလျှင်စစ်ဆေး check box ကိုဖွင့်ဖို့အလွန်အမင်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
အများဆုံးကိစ္စများတွင်, သင်သာအချိန်ကိုပြောင်းလဲစေနှင့် (အခြားအရာအားလုံးသည်အလိုအလျောက် configure ပါလိမ့်မယ်) ကိုစမ်းသပ်စတင်နိုင်ပါသည်။
2) စမ်းသပ်စဉ်အတွင်းအထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်, သင်ကွဲပြားခြားနားသော parameters တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်ဒီတော့ထွက်ကဒ်များ၏အပူချိန်, တစ်စက္ကန့်ဘောင် (FPS) ၏နံပါတ်, စမ်းသပ်မှုအချိန်နှင့်။
ကဒ်) ကို FPS 52 ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် - 3) ကိုစမ်းသပ်၏အဆုံးပြီးနောက်ညာဘက်, program ကိုဇယားပေါ်တွင်သင် (။ 72% အားဖြင့်ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာဒေါင်းလုပ်ရသောအခါငါ၏အမှု၌, (DirectX ကို 11, Shader 4.0 ညှစ်သံမြည်, ဆုံးဖြတ်ချက် 1366x768) FPS အပူချိန်နှင့်နှုန်းကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှု (အမှား) စမ်းသပ်အတွက်အမှားအယွင်းများမှပေးဆောင်ရပါမည် - သူတို့ရဲ့အရေအတွက်ကသုညဖြစ်သင့်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်များသောအားဖြင့် 5-10 မိနစ်အကြာတွင်။ အဲဒါကိုကဒ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကလုပျနိုငျမည်သို့ပြုမူရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုနျူကလိယ (GPU ကို) နှင့်အလုပ်မှတ်ဉာဏ်၏အောင်မြင်မှုများအဘို့စစျဆေးဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စမ်းသပ်မှုအောက်ပါဖြစ်သင့်:
- မှိတ်ဒါမှမဟုတ်မော်နီတာကို turn off, မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်ကာစရာကုလားကာအပေါ်ပုံရဲ့ပျောက်ဆုံးမှု;
- အပူလွန်ကဲအပူချိန်သိသိသာသာတိုး (ကြောင့်အပူမှဗီဒီယိုကဒ်၏အဆင့်ကို 85 က c စင်တီဂရိတ်အထက်မလိုလားအပ်သောအပူချိန်ပါဝင်နိုင်ပါသည်: ဖုန်မှုန့်, ကျိုးအေး, အားနည်းလေဝင်လေထွက်အိုးအိမ်, etc .... );
အရေးကြီး! စကားမစပ်, အချို့သောအမှားများကို (ဥပမာ, အပြာရောင်မျက်နှာပြင်, ဒါပေါ်မှာကွန်ပျူတာအေးခဲနေသောနှင့်။ ) အဆိုပါယာဉ်မောင်းများ၏သို့မဟုတ် Windows ၏ "မှားယွင်းတဲ့" ဟုခေါ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ / reinstall upgrade နှင့်နောက်တဖန်သူတို့၏အလုပ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့အကြံပြုသည်။
ဖြစ်ကောင်းစမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်များ၏တဦးတည်း။ အမျိုးမျိုးသောစာပေက်ဘ်ဆိုက်များ, etc ထဲမှာထုတ်ဝေအများစုမှာစမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် - ။ ဒါဟာတှငျကငျြးပခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားယနေ့အထိဗီဒီယိုကဒ်စစ်ဆေးနေများအတွက် 3D မာကု3အဓိကဗားရှင်းရှိပါတယ်:
3D မာကု 06 - DirectX ကို 9.0 ထောက်ခံမှုနှင့်အတူအဟောင်းကဗီဒီယိုကဒ်အတည်ပြုရန်။
3D မာကု Vantage - DirectX ကို 10,0 ထောက်ခံမှုနှင့်အတူဗီဒီယိုကဒ်ကိုစစ်ဆေး။
3D မာကု 11 - DirectX ကို 11,0 ထောက်ခံမှုနှင့်အတူဗီဒီယိုကဒ်ကိုစစ်ဆေး။ ဤတွင်ပေါ်မှာငါသည်ဤဆောင်းပါး၌အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
တရားဝင် website တွင် download ပြုလုပ်အနည်းငယ်ဗားရှင်း (အဲဒီမှာပေးဆောင်နေကြသည်နှင့်အခမဲ့လည်းမရှိ - အခမဲ့အခြေခံပညာ Edition ကို) ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်များအတွက်အခမဲ့ရှေးခယျြ, အပြင်, ကအများဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်အလုံအလောက်ထက်ပိုပါရှိပါတယ်။
1) (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ Screenshot ကိုကြည့်ပါ), program ကို Run ထို option ကို "သာ Benchmark စမ်းသပ်" ကိုရွေးချယ်ပါနှင့် button ကို Run ကို 3D မာကုကိုနှိပ်ပါ။
2. ထို့နောက်အမျိုးမျိုးသော data တွေကိုကိုင်တွယ်များအတွက် Processor နဲ့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကငျြ့ပါမညျဘယျလိုတစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများစမ်းသပ်မှု :. ပထမဦးစွာစသည်တို့ကိုပင်လယ်ကို၏အောက်ဆုံးသမုဒ္ဒရာ, အဲဒီနောက်တောတွင်း, ပိရမစ်, အမျိုးမျိုး load လုပ်ဖို့အချိန်စတင်။
3. စမ်းသပ်ခြင်းအကြောင်းကို 10-15 မိနစ်ခန့်ကြာပါသည်။ သင်သည်သင်၏ရလဒ်များကိုနှင့်အတူဖွင့် browser ကို tab ကိုပိတ်ပြီး, နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုကတည်းက - လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါလျှင်သူမပါအမှားအယွင်းများရှိခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့ရလဒျမြားနှငျ့တိုင်းတာ FPS သည်အခြားသင်တန်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ စကားမစပ်ကိုအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကို (သင်ချက်ချင်းကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်းဂရပ်ဖစ်ကဒ်တန်ဖိုးထားနိုင်သည်) ထို site ပေါ်တွင်အထင်ရှားဆုံးသောအရပ်တွင်ပြသလျက်ရှိသည်။